Ungayithola Kanjani Inhloso Yokuwina Kumdlalo We-E-Commerce | Martech Zone
Ngenkathi kuNdebe Yomhlaba kungaphumelela oyedwa kuphela, izinkampani eziningi zingathola impumelelo emdlalweni we-e-Commerce. Kunamaqhinga afakazelwe asize abathengisi ukuthola amaphuzu. I-Baynot ikukhombisa ukuthi ungabafaka kanjani abadlali abadlala phambili futhi wakhe uhlelo lomdlalo olunamandla ukuze ibhizinisi lakho le-e-Commerce likwazi ukuletha impumelelo ekhaya.
Ngaphambi kokuthi kuqale isizini, amaqembu kufanele aqale atshale imali kubadlali abaphezulu. Uma kukhulunywa nge-e-Commerce 5 kwezingu-10 izimali zabathengisi ezibaluleke kakhulu ezisemakethe. Ama-56% wabathengisi atshala imali ekuthengisweni kwezinjini zokusesha nasekutholakaleni kwamakhasimende, ama-51% ekugcineni amakhasimende, ama-48% kumakhasi angukhiye athuthukisiwe, kanye nama-42% ku-SEO. Ku-infographic engezansi, I-Baynot yethula imininingwane evela kuNhlolovo Yomthengisi Yonyaka Yesi-14, ekhombisa lapho abathengisi batshala imali khona, ukuthi babona kanjani ukuguquka kwezidingo nezidingo zomthengi, nokuthi yimaphi amasu aletha ama-ROI amakhulu kunawo wonke.
Tags: ukushayela ukuthengisae-commerceukuthengiswa kwe-ecommerceukuhweba ngomakhalekhukhwiniRIOindebe yomhlaba 2014
Jul 21, 2014 ku-3: 38 AM
Ngazi izinto eziningi ezintsha zesiza se-e-commerce futhi ngiyaqiniseka ukuthi lokhu kuzongisiza kakhulu. Ngikuthandile ukubonwa kolwazi lapha futhi kuzosebenza ngokufanayo.